पेट्रोलिय पदार्थको हाहाकार हुने ! दुई दिनदेखि पेट्रोलको एक थोपो नेपाल छिरेन «
पेट्रोलिय पदार्थको हाहाकार हुने ! दुई दिनदेखि पेट्रोलको एक थोपो नेपाल छिरेन
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०८:०४
वीरगञ्ज, यातायात बन्दले वीरगञ्ज नाका बन्द भएको छ । सवारी चालकले आह्वान गरेको यातायात बन्दले वीरगञ्ज नाका ठप्प भएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मुलुककै मुख्य नाका हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार सवारी चालकले आह्वा गरेको भन्दका कारण वीरगञ्जबाट हुने आयातनिर्यात प्रभावित भएको छ । लगातार दुई दिनदेखि चालकहरूको आन्दोलनका कारण वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ नभित्रिएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
भन्सारका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार अन्य मालबस्तुको पनि भन्सार जाँचपास भए पनि ढुवानीका साधन नचल्दा भन्सार परिसरमै अलपत्र परेका छन् । एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा करीब ६ सय गाडी रोकिएको छन् । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा पनि ढुवानी अवरोधले कण्टेनर ढुवानी अवरुद्ध भएका छन् । स्थानीय उद्योगले ल्याएको कच्चा पदार्थको ढुवानीसमेत प्रभावित भएको छ । बन्दरगाहसम्म आइपुगेको कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म पु¥याउन नपाएको उद्योगीले बताएका छन् ।
बस चलाउने चालकलाइ, किन गाडी चलाएको ? भन्दै जुत्ताको माला
झापा, ४ असोज । तीन दिन देखि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात संचालकहरुले यातायात साधन चलाएको भन्दै जुत्ताको माला लगाइदिएका छन् । मुलुकी ऐनको विरोध गर्दै यातायात चालकहरुले तीन दिनदेखि मुलुकभर यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् । नयां कानुनमा चालकको लापरवाहीले यात्रुको ज्यान गए सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वको विर्तामोडमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने सवारी चालकलाई बन्दकर्ताहरुले जुत्ताको माला लगाएका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुले हात हातमा जुत्ताको मालो लिएर हिडेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने चालकलाई बिच सडकमा गाडी रोकेर जुत्ताको माला लगाइदिएका छन् ।
गाडी बन्द गराउँदै सडकमा उत्रिएको चालकहरुको एउटा समूहले हातमा जुत्ताको माला बोकेको हुन्थ्यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गुड्दै गरेका हरेक सार्वजनिक बसलाई उनीहरुले रोक्दै चालकलाई जुत्ताको माला लगाइदिन थालेपछि केही बेरमा प्रहरी पुगेको थियो । प्रहरीले त्यस्तो कृयाकलाप गर्ने ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाको टोलीले यातायात बन्द गराउँदै जुत्ताको माला लगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि केही बेर दोहोरो झडपको अवस्था समेत आएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डिएसपी कृष्ण कोइरालाले ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।
पूर्वी जिल्लामा मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक यातायातका साधन प्रायः ठप्प भए पनि बिहिवार भने केही चालकले यातायातका साधन चलाएका थिए । सवारी साधन चलाउने पक्षमा रहेका चालकहरुले धरान तथा विराटनगरबाट यात्रु बोकेर काँकडभिट्टा सम्म पुगेका छन् । सवारी ऐनमा भएको ब्यवस्था राम्रोसंग नपढी सवारी चालकहरु आन्दोलनमा लागेका छन् ।
छ्यास्स केही भइसक्दा जन्मकैद हुन्छ रे,’ पक्राउ परेका एक चालकले प्रहरीसमक्ष भनेका छन् । नयाँ मुलुकी ऐनमा सवारी दुर्घटना हुँदा चालकलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको अधिकांश चालकको बुझाइ छ